Soo dejisan Evernote 6.22.3.8816 – Windows – Vessoft
WindowsXafiiskaQoraalada iyo JadwalkaEvernote
Bogga rasmiga ah: Evernote
Evernote – software ah si ay u abuuraan iyo edit qoraalo ah. software waa weyn yahay si ay u qoraan macluumaadka lagama maarmaanka ah, jadwal arrimaha iyo hagaajin dhacdooyinka kala duwan. Evernote u saamaxaaya in ay soo lifaaq sanamyada, kuwan raadkaygay maqal ah, Screenshot, files PDF in qoraalada. software waxaa ku jira arrimo ka dhisay-in la isticmaali karo inta lagu jiro abuurista qoraalada. Evernote kuu ogolaanayaa inaad u dhigay, xusuusinta arrimaha la qorsheeyay. Evernote sidoo kale waa inay awoodaan inay waafajinta xogta badbaadiyey la kaydinta daruur oo siiya helitaanka ah in macluumaadka loo baahan yahay oo ka soo qalabka kala duwan ee.
Waxay abuurtaa qoraalada noocyada kala duwan
Lifaaqaya of files ah
meelaha sirta qoraalada iyo soo xulay ee qoraalka
.Wadashaqayntaas La qalab mobile
Soo dejisan Evernote
Faallo ku saabsan Evernote
Evernote Xirfadaha la xiriira
Tani waa software si loo abuuro loona maamulo qoraallada, kaas oo taageera wada shaqaynta qalabka iyo qalabka dhammaan qalabka isticmaalaha.
Qalab quwada leh ka raadi erayo iyo odhaaho loo baahdo. Software soo bandhigayaa ee sharaxaada iyo ku dhawaaqida saxda ah ee erayada helay iyo sidoo kale doorteen micne ah ama antonyms iyaga.